LEGO Harry Potter ၏ထူးခြားသော Diagon Alley ဇာတ်ကောင်လား။
LEGO Harry Potter ၏ပြက္ခဒိန်တွင်ပါ ၀ င်မည့်သီးသန့် Diagon Alley အသေးစားရုပ်ပုံသည်ကောလဟာလဖြစ်သည်
17 / 03 / 2021 17 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1269 Views စာ0မှတ်ချက် 75964 ဟယ်ရီပေါ်တာထွန်းပြက္ခဒိန်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၏ကျောက်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ထွန်းပြက္ခဒိန်တွင်အသေးအမွှားရုပ်ပုံများပါ ၀ င်နိုင်သည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley.
Promobricks ပွဲလမ်းသဘင်၏တတိယမြောက် wizarding အရစ်ကျတစ်ဖန်ပတ်ပတ်လည်ဗဟိုပြုလိမ့်မည်ဟုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ရဲ့ကျောက်ခေတ်, 2019 ရဲ့ 75964 ကိုက်ညီ ဟယ်ရီပေါ်တာ ထွန်းပြက္ခဒိန်။
ထိုလွှတ်ပေးမှုသည်ရုပ်ရှင်၏ခရစ်စမတ်မြင်ကွင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်သည်အချို့သောဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပူးတွဲပါအသေးစားဓာတ်ပုံများသည်အချို့သောအစီအစဉ်များကိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးမှလှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူနိုင်သည်။
အချက်ပြမှုတစ်ခုအနေဖြင့် Promobricks ကအသေးအဖွဲပုံတစ်ပုံသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyသီးသန့် ဟယ်ရီပေါ်တာ မူကွဲ။ Diehard Potterheads သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သော Wizarding World set တွင်ဟယ်ရီအသေးစားပုံစံ ၂ ခုပါရှိကြောင်းသိရလိမ့်မည် - တစ်ခုမှာသူ၏ Gryffindor အင်္ကျီနှင့်တစ်ခုမှာသူ၏အပြာရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ - သို့သော် Promobricks ၏ဖော်ပြချက်အတိုင်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဟာမသိဘူး 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley minifigure (ရှိပါက) ဒီနှစ်မှာပါဝင်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ သည်အထိထွန်းပြက္ခဒိန် Lego Promobricks က Ron, Hermione, Griphook နှင့် Dudley Dursley အမျိုးအစားအသစ်များကိုသူ၏ညဝတ်အင်္ကျီများတွင်ပါ ၀ င်မည်ဟုယူဆသော်လည်းအုပ်စုသည်တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤထင်မြင်ချက်အပါအ ၀ င်ယခုနှစ်ပွဲနေ့များနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး Marvel ထွန်းပြက္ခဒိန်) လုံးဝကောလာဟလများဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်တာဝန်ရှိသူမှထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်းမခံရမချင်းဆက်ဆံသင့်သည်။
ဒီဟာကကောင်လေးနဲ့အတူတူပဲ၊ ကောင်လေး wizard အတွက်နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်လာသည် ပထမ ဦး ဆုံးဇန်နဝါရီလလှိုင်း 2018 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်စတင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်တစ် ဦး ကတည်းက အစုံ၏ 20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လှိုင်း နွေရာသီ (a နှင့်အတူတစ် ဦး နှင့်အတူ) နွေရာသီတွင်စတင်လိမ့်မည်ဟုကောလဟာလများ Quidditch-themed ဆက်စပ်ပစ္စည်း pack ကို).
← Lego Ideas 21326 Winnie the Pooh VIP လွှတ်တင်မှုနှောင့်နှေး
သင့် LEGO ကိုယူပါ BrickHeadz LEGO အတွက်အလွန်ကောင်းသောအိမ်ပြင်သို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ Ideas →